Soomaaliya, 10 October 2019
Bandhigga VOA: Mashruucyada lagu caawiyo dadka saboolka ah
Wareysi: Ergeyga Somalia ee Ururka Islaamka
Danjire Cabdirisaaq Siyaad Cabdi (Sancaani) oo ah Ergeyga Joogtada ah ee dawladda Somalia u fadhiya ururka Iskaashiga Islaamka oo qeyb ahaa shirkii Golaha Guud ee QM ee dhawaan ka dhacay magaalada New York ee dalka Maraykanka ayaa ka hadlay wax-qabadka ururka
Xafiiska Hanti-dhowrka Qaranka ayaa soo saaray warbixin ku saabsan baaritaan maaliyadeed oo ay ku sameysey heyadaha dowlada, taasi oo lagu ogaaday in la isticmaalay daqli la soo ururirey iyadoo aanan sharciga loo marin.
Farmaajo oo furay kal-fadhigga 6-aad ee baarlamanka
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta furay kal-fadhigii 6-aad ee labada aqal ee baarlamaanka tobonaad ee Soomaaliya.
Hawlaha garoonka Muqdisho oo caadi kusoo noqday
Hawlaha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa la sheegay inay caadi kusoo noqonayaan kadib markii goor hore ay diyaarad ku degtay candhada dhabbaha diyaaradaha ee garoonka Aadan Cadde.
Askar ku dhimatay qarax ka dhacay duleedka Muqdisho
Afar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa ku dhimatay, saddex kalana way ku dhaawacmeen kadib miino kula qaraxday duleedka Muqdisho.
Dhabbaha diyaaradaha ee garoonka Aadan Cadde oo la xiray
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in si ku meel gaar ah uu xiran yahay dhabbaha diyaaraduhu kasoo degaan kana kacaan ee garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Hooyada wiil 9 sano ku xiran Tanzania oo codsi dirtay
Hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Canab Cali Faarax ayaa ugu baaqday mas’uuliyiinta Soomaaliya inay gacan ka gaysteen sii daynta wiil ay dhashay iyo tododba qof oo kale oo Soomaali ah oo ay sheegtay inay ku xiran yihiin dalka Tanzania.